သားတို့သမီးတို့ ဘယ်လိုကျောင်းတက်ရမှာလဲဟင်… ? တဲ့ စိတ်မကောင်းလိုက် တာဗျာ….. – Na Pann San
သားတို့သမီးတို့ ဘယ်လိုကျောင်းတက်ရမှာလဲဟင်… ? တဲ့ စိတ်မကောင်းလိုက် တာဗျာ…..
Na Pann | May 28, 2020 | Local News | No Comments
မနှစ် က ရေးမြို့နယ်ဖက် မှာ ဝိသမလောဘသားများ ရဲ့ သစ်တောများခုတ် ၊သယံဇာတတွေတူးဖေါ်မှုကြောင့် သဘာဝတရားကြီးဖေါက်ပြန် ရေဘေးကပ်များကြုံတွေ့မှုအား နာရေး ကူညီမှု အသင်း ( ရန်ကုန် )မှသွားရောက် ကူညီဖေး မပေးရင်း “ပေါ့ဆော့”ကျေးရွာ ရှိ ကလေးငယ်များ ၏ပြသမှုနှင့်သူတို့ရဲ့” သားတို့ သမီးတို့ ဘယ်လို စာသင်ရ မှာ လဲ ?”ဟုမေးမြန်းမှုတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နာကူ( ရန်ကုန် ) တွင် ရှိသည့် အလှူငွေအား အချိုးကျခွဲခြမ်းပြီး “ပေါ့ဆော့ကျေးရွာ”တွင် အသစ်ဆောက် လုပ်ပေးနေ သည့် အုတ်ကျောင်း ငယ်လေး အား တင်ပြ အပ် ပါ သည်။
ယခင် ကျောင်းသား ၊ကျောင်းသူကလေးငယ်( ၅၀ )ခန့် သာ တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်သည့် သစ်ကျောင်းဆောင်လေး မှ ယခု ကလေးငယ်(၁၀၀) ခန့်ပညာသင်ကြားနိုင်မည့်အုတ် ကျောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ ပါတော့သ ည်။
ကျောင်းတည် ဆောက်ရာတွင် အကူအညီပေးခဲ့သောနယ်ခံ မိဘပြည်သူများနှင့် အပင်ပန်းခံကူညီပေးခဲ့သော ရေးမြို့မိသားစု ပရဟိတအဖွဲ့သားများအားအထူးကျေးဇူးတင် ရှိ သလို ပါဝင်လှူဒါန်းကြသော ရေဘေးကူညီမှုအလှူရှင်များအား လည်း သာဓု သာဓု သာဓုခေါ်ဆို လိုက်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ “ချဲတိုက်ကျေးရွာ” ရှိပျက်စီးယိုယွင်းနေသော သစ်သား စာသင်ကျောင်းအားလည်း အုတ်ကျောင်းအဖြစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းရန်ရှိသေးသဖြင့် လှူဒါန်းလိုသောအလှူရှင်များအားလည်းဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည် ။ ကိုဗစ်ကြီးပြီးသွားရင် သားတို့သမီး တို့ စိတ်ချပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်တော့ မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း ရန်ကုန်)
နေပြည်တော်ထိတက်မယ်.ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်မယ်ပြောလို့ တင်လိုက်စမ်း ဟောဒီမှာ ဆိုပြီး ထမီးကြီး လှန်ပြလိုက်တဲ့ မတင်ရွှေ( ရုပ်/သံပါ ) ( ၁၀ နှစ်အောက်မကြည့်ရ )
ဗစ်တိုးရီးယားလေး နစ်နာစေမှုအတွက် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းကို တရားစွဲရန် အချိန်ကျော်လွန်သွား သဖြင့် တရားမစွဲနိုင်တော့ ……
ဓာတ်ခွဲလူနာ (၁,၂၀၀)ခုအား စစ်ဆေးရာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ အတည်ပြုလူနာသစ် ( ၂) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
မုဒိတာအိမ်ရာ က ကာအ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှောင့်ယှက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားကိစ္စ တာဝန်ရှိသူများ နှာစေးနေ